Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida Loogu Xidho Mashiinka Dhaqida Qasabada
2020 / 09 / 17 QoondayntaTilmaamaha qasabada 2068 0
Qasabada mashiinka dharka lagu dhaqo waa qayb aad muhiim ugu ah mashiinka dharka lagu dhaqo. Dad badan ayaa ku wareejiya waxyaabo fara badan qasabadda mashiinka dharka lagu dhaqo, gaar ahaan mashiinka dharka dhaqda. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa laga yaabaa inay la kulmaan tuubbo daadinaysa mashiinka dharka si toos ah u dhaqda. Maxaan sameeyaa haddii qasabadda mashiinka dharka lagu dhaqo ay daadato? Bal aan fiirino sida loogu xiro qasabada mashiinka dharka lagu dhaqo iyo wowow!
Maxaa la sameeyaa haddii mashiinka dharka lagu dhaqo uu ka soo daadanayo tuubada
1. Dhuumaha tubada biyaha lama adkeeyo. Xaaladdan inta badan waxay dhacdaa marka isku xiraha aan la adkeynin markii tuubbada tubbada biyaha la rakibo, taasoo keenta biyo daadasho marka mashiinka dharka lagu dhaqo la isticmaalo, ama isku xirahu uu dabacsan yahay ka dib marka mashiinka dharka lagu dhaqo muddo dheer. Adeegso qalabka dayactirka si aad u adkeyso isku xiraha, ka dibna xalka waa la xalliyaa Dhacdada ah in tuubbada biyaha laga soo galo ee mashiinka dharka lagu dhaqo ay daadinayso.
2. Tuubada galitaanka ayaa jabtay. Nabaad-guurka biyaha ee muddada-dheer awgood, daxalku wuxuu ku dhici doonaa isku-xidhka tuubbada tubbada biyaha, iyo dheecaan biyo ayaa dhici doona. Xalka kaliya ayaa ah in la badalo tuubada tubada tubada biyaha.
3. Sababta ugu badan ayaa ah dhaawaca cajaladda joojinta biyaha ee tubbada (hagaajinta fur). Xaaladdan oo kale, kaliya isticmaal furka si aad uga saarto tuubada, oo dib ugu duub cajalad cusub oo joogsada biyaha halkaas oo furku ka go'an yahay.
4. Haddii qasabada si adag loo xidhay, sababta ka bixitaanka biyaha waxa laga yaabaa inay ka baxdo marinka biyaha, taas oo guud ahaan ay keento xirashada goomaha axial ee qasabadda. Xaaladdan oo kale, waxaad u isticmaali kartaa weel si aad u dabciso qanjirka oo aad u saartid, u isticmaal xajin inaad ka soo saarto goomaha wiishka, kuna beddel gasket masaf cusub.
5. Intaas waxaa sii dheer, waxay noqon kartaa baxsi biyo ah oo ku jira farqiga hoose ee qasabadda qasabadda oo ay sababtay xirashada goomaalka saddex-geesoodka leh ee qanjirka. Xaaladdan oo kale, fur daboolka si aad uga saarto madaxa balka, ka dibna dabci oo ka saar qanjirka, ka dibna ka soo saar goomaha saddex-geesoodka ah ee qanjirka dhexdiisa kuna beddelo mid cusub.
6. Furitaanka lowska daboolka wuxuu kaloo sababi karaa biyo ku daata meesha isku xidha tuubada isku xidha. Waad dib-u-adkeyn kartaa lowska daboolka ama waxaad ku beddeli kartaa gasket cusub oo U-eg.
2. Sida loogu xiro mashiinka dharka lagu dhaqo tuubada
1. Kahor intaadan ku xirin mashiinka dharka lagu dhaqo tuubada, waxaan u baahanahay inaan ilaalino nooca qasabada. Hadday tahay qasabada mashiinka dharka lagu dhaqo, rakibidu waa mid aad u fudud. Waxaan u baahanahay oo keliya inaan si toos ah u gelino tubbada tubbada tubbada ee tubbada tubbada biyaha, iyo dhinaca kale ee tuubbada tubbada biyaha Kaliya ku xir mashiinka dharka lagu dhaqo. Ka dib marka mashiinka dharka lagu dhaqo uu ku xirmo tuubada, waxaan wali u baahanahay inaan tijaabino, badanaa si aan u eegno inay jiraan wax daadanaya
2. Haddii qasabadda mashiinka dharka lagu dhaqo uu yahay nooca caadiga ah, markaan iibsanno tubbada tubbada ee tubbada mashiinka dharka lagu dhaqo, ganacsadaha waxaa laga yaabaa inuu siiyo madax bir ah. Haddii aysan jirin hadiyad, markaa waxaan u baahanahay inaan soo iibsanno adabtarada qasabadda. Guud ahaan, madaxa birta ah ee ganacsaduhu siiyo wuxuu kuxiran yahay tuubada galitaanka biyaha ee mashiinka dharka lagu dhaqo. Waxaan u baahanahay oo keliya inaan u isticmaalno madaxa birta ah si aan ugu xirno qasabadda wax lagu dhaqo, ka dibna adkeyno furka oo ku xir tubbada tubbada biyaha ee dhinaca kale mashiinka dharka lagu dhaqdo. Ka dib marka tuubada la xirayo, waxaan wali u baahanahay inaan tijaabino.
Hore:: Tilmaamaha Iibsiga Qasabada Next: Ma u Baahan Tahay Aerator on Tuunbo?
2021 / 06 / 22 189
2021 / 05 / 13 2867
2021 / 05 / 09 3885
2021 / 05 / 08 1656
2021 / 02 / 04 2785
2021 / 02 / 03 1487